ngomphathi ku 18-05-07
Qho ngeveki, abathengi ezivela kulo lonke ihlabathi ukuza kusityelela China Red Flag Textile, Ukraine, Turkey, eRashiya, Moldova, Romania, iYiputa, India, Indonesia, Vietnam, Brazil, Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Tajikistan, Venezuela, Mauritius njl ngu intsimi tyelela China Red fl ...
mboniso Impumelelo Textile International Exhibition
Kutsha nje konyaka onesiqingatha, China Qingdao Tianyi Group Red Flag textile noomatshini sele inxaxheba Turkey Istanbul, Indonesia Djakarta, Pakistan Karachi, Egypt Cairo, Bangladesh Dacca, India Ahmedabad kunye Surat International Textile mboniso. Mazize abahlobo abaninzi abadala kunye nabathengi ezininzi ezintsha. Ukuze ufumane ukuba k ...
Egypt abathengi ezinkulu, sele kuthenga ngaphezu kwekhulu umoya jet ngodlame. Enkosi bakholwe nenkxaso. Eli xesha, 24 izikhongozeli unyawo-40 zizakulayishwa kwakhona. Zonke esisemnyango ukuba siko eyenziwe ngomatshini, indlela tuck-in emoyeni: Operation nolondolozo lula, aphezulu kakuhle namandla zokonga. inzuzo engcono th ...
Emva China New Year umthendeleko, uqeqesho lokuqala zobungcali. Bonke abasebenzi kufuneka uqeqesho kwaye yavavanyelwa kuphela kwinqanaba standard unako ukungena umsebenzi oqhelekileyo. Ukususela abasebenzi ibandla phambi-umgca emva-nkonzo abasebenzi abaqeqeshiweyo, kuquka iintengiso zokuthengisa, abasebenzi zemali, kwekhwalithi amadoda njalo njalo. W ...
I ITMA Asia + CITME 2016 zaye zabanjwa e Shanghai, China-21 ukuya kowama-25 ku-Oktobha kwi-National Exhibition kunye Convention Centre. Qingdao Tianyi Group Red Flag Textile Machinery CO., LTD ibambe iingxoxo zobugcisa kunye neendwendwe ezingaphezu kwe-1000 ngexesha iintsuku ezintlanu Shanghai mboniso. Uninzi th ...